Dabeecadda iyo Soomaalida!! | HimiloNetwork
Dabeecadda iyo Soomaalida!!
Posted by: Zakariya in Kobciye July 24, 2015	0 468 Views
Muqdisho – Runtii qadarinta tix-galineed ee bulshada iyo in qofku dhaleecadiisa kaga mashquulka dhantaalka qof kale ceebihiisa, waa wadiiqada ugu toobiyeysan ee qofku nolosha ku garan karo. Amaanta, deeqda iyo kalsamida qofnimana waa hubka ugu fudud ee aad bulshada ku badali karto kuna hanan karto dareenkooda.
Maanta, kadib is-fahan wada-noolaansho iyo is-dhex-gal hamrasho iyo xaq-dhowr ku dhisan oo dadyowga Caalamku kusii hiranayaan, innaga Soomaali ahaan, waxaan dib uga sii dhaceynaa ilbaxnimada dunida casriga ah.
Xittaa heysasha asal-raacnimada ah ee Islaamka diin ahaan, tan iyo if-usoo baxeedii, wali si la muudsan karo umaynan dhadhamin miidda hab-nololeed ee Islaamka. Tani ayaa ka dhigan inaynan si guud u fahmin macnaha balaaran ee Islaamku ina barayo.
Fal-dhasiignimada ku hor-gudban wada hadalka iyo wax is-weydaarsiga ummada iyo aarsiga qof lagu eedsiiyo gaboodfalkiisa—iyada oo wax cafintu aysan door buuran ku laheyn hab-dhaqanka bulshada—ayaa ah qab iyo isla-weyni aan quluud iyo milga laheyn oo Soomaalida dib ula haray dad, diin iyo dal ahaan.
Falalka wax ceebeynta, bayuurinta iyo meelka-dhaca sirgaxan ee la iskula hadlo—kaftan iyo kaftan-dhablaba—waa waxa xaqii qof walba ku lahaa walaalkiis wali ka la’yahay. Waana midda dhidibada u aastay kala-irdhowga Soomaalida ku dhashay.
Previous: Waayihii Mandera kala raray wali halkiisii!!
Next: Dabeecadda iyo Soomaalida!!
Wali ma maqashay suuqa dadka meydadka ‘Souq of the dead’?!
Q4aad: Ereyo iyo Oraahyo Jaceyl xanbaarsan!
Nin Xabaal iskiis iskugu aasay si uu mar kale usoo noolaado isaga oo Ilaah ah!